Fiji: Mamely mafy ilay “fananganana Fiji tsara kokoa” ireo mpitoraka blaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2008 8:54 GMT
Komity iray najoron'ny governemantan'i Fiji no nandroso vinavina misy teboka 11 ho fanampiny ao amin'ny Lalampanorenan'ity nosy ao amin'ny Ranomasimbe Pasifika ity sy “hananganana firenena iray tsy misy fanavahana ara-poko, mavitrika sy mivondrona ara-kolotsaina, tsara tantana sy tena democratika ao ”. Ity vinavina misy pejy 75 ity, mitondra ny lohateny hoe “Volavolan-tSatan'ny vahoakan'i Fiji ho amin'ny Fiovana, ny Fandriampahalemana ary ny Fandrosoana (antontan-taratasy .pdf azo jerena eto [amin'ny teny anglisy] ) dia natolotra tamin'ny Alarobia [6 aogositra 2008] mba hahafahan'ny olona mitondra ny fanamarihany sy ny soso-keviny mikasika azy ity.
Ireo mpikambana miisa 45 ao anatin'ity Filan-kevitra ho Fananganana Fiji tsara kokoa ity, izay nanoratra ireo tolo-kevitra ireo taorian'ny valo volana niasany, dia samy notendren'ny governemanta vonjimaika nilaza tena, tarihan'ny contre-amiral Josaia Voreqe (Frank) Bainimarama, izay naka ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 5 desambra 2006.
Ny Filan-kevitra ho Fananganana Fiji tsara kokoa dia manana andraikitra mifantoka bebe kokoa amin'ny “fanafoanana ny kolontsain'ny fanonganam-panjakana” [amin'ny teny anglisy] ao amin'ity fanjakana anivon-drano ity, izay efa in-efatra izao hatramin'ny 1987 no nanelingelenana sy nampitsaharan'ny tafika ny fizotry ny, maha kenda roroka ny fandrosoana ara-toe-karena sy misarika ho amin'ny “tsy fahaiza-mitantana ary ny gaboraraka”. Mba hisorohana ny fitsabahana lava ataon'ny tafika eo amin'ny resaka fiainana ara-pôlitika, dia miaiky ity vondron'asa ity fa ilain'ny firenena ny manafoana ny “fifandonana pôlitika milafika resaka ara-poko” izay mampifandramatra ny mponina manana fihaviana indiana, ka ny razamben-dry zareo dia ireo mpanao raharaha nafaran'ny mpitantana kolonialy britanika tamin'ny faran'ny taonjato faha XIX su ny fiandohan'ny taonjato faha XX mba hanmpandeha ny asa fanaovan-tsiramamy Nandritry ny ampolotaonany maro, ireo Fijiana manana fiaviana Indiana, izay haindoista ny ankamaroany, dia somary nanatombo an'isa. Saingy hatramin'ny fanonganam-panjakana roa tamin'ny 1987, niakatra be ny fifindra-monin'ireo fijiana manana fiaviana indiana ireo, ka nanjary ny mponina melaneziana, indrindra ny kristiana, no mameno ny 57%n'ny mponina
Ilay volavolan-tSata dia mametraka fa raha tiana handroso ny firenena, dia ilaina ny haneken'ny rehetra fa ny Lalampanorenana no lalana fototry ny fanjakana, ilaina ny hanitsiana ny fombam-pifidianana mifototra amin'ny fanavankavahana ara-poko [amin'ny teny anglisy] sy hanahàna ny olan'ny fananan-tany, iray amin'ireo olana goavana sedrain'ny firenena, amin'ny fanalalahana ny fahazoan'ireo vondrona foko tsirairay hanana tany amin'ny fampitomboana ny haben'ny faritra azo volena efa misy atao amin'ny fifanarahana fampanofàna maharitra. Nilaza ny governemantan'i Bainimarama fa ireo fepetra ireo dia ilaina laniana mialohan'ny fahafaha-mametraka ny demokrasia amin'ny alalan'ny fifidiana faobe izay voafaritra tany am-piandohana fa hatao ny Martsa 2009, nefa nahemotra indray [amin'ny teny anglisy] taty aoriana kely.
Tany amboalohany, tsy dia nakasitraka loatra ilay volavolan-tSata ireo mpampita vaovao maventy sy ny ankamaroan'ireo mpitoraka blaogy. Be ny nanakiana ny soso-kevitr'ilay komity milaza hoe ny avy any amin'ny nosy Fiji dia ho antsoina hoe “Fijiana”, ary ireo melaneziana dia hovàna hoe ” itaukei”, mba hisorohana ny ethno-nationalisme. Amin'izao fotoana, ny fiantsoana hoe “Fijiana” dia ampiasaina hilazana ny melaneziana, raha antsoina kosa hoa “Indo-Fijiana” ireo taranaka avy amin'ireo mpiasa indiana.
I gdevreal, mpanentana ao amin'ilay forum be mpitsidika atao hoe Fiji Board Exiles [ami'ny teny anglisy], dia mihevitra fa tokony hitady anarana hafa tsy mbola nampiasaina mihitsy ilay komity raha te-hanova ny fiantso ireo mponina ao Fiji, tsy tokony ho nampiasaina izay efa teo taloha:
Mitadiava zava-baovao fa tsy maka mindrana ny an'ny sasany. Tsy rariny ny hangalarana amin'ny vondrona iray mba hanomezana fahafaham-po vondrona iray hafa. Mifidiana teny iray izay tsy mbola nanan ny dikany, amin'izay ho voahajanareo ny zon'ireo Fijiana hisitraka ny azy, izay efa nanomezan'ny Lalampanorenana fiantohana rahateo ho an'ireo mponina rehetra ao Fiji.
Ny mponina rehetra any Inde ve izao dia antsoina hoe Indiana daholo? Na Japoney ny any Japana?
“Teratanin'i Fiji”, ampy izay…
Anaty hafatra iray hafa ao amin'io forum ihany no itondran'i real jack fomba fijery iray ara-tantara momba ny teny hoe “Fijiana”, izay tondroiny ho “noforonin'ireo britanika mpanjanaka” :
Raha nandray anjara tamin'ny lalao iraisam-pirenena momba ny Golf i Vijay Singh dia teratany Fijiana no nilazan'ny rehetra azy, indrindra fa ireo mpampahalala vaovao, toy ny hoe mari-panavahana iray izany, ary tamin'ny fanadihadiana tamin'ny fahitalavitra, dia fehezanteny toy ny hoe “ilay Fijiana Vijay Singh no nandrombaka ny Masters amerikana” no mbola neneho izany, toy ny tsy mbola fantatra mihitsy hoe fijiana anie izy! lol.
Tsy hihinanantsika hanina akory ity adihevitra momba ny teny hoe “Fijiana” ity, tsy mampandroso na inona na inona io. Tsy izany ihany koa fa tsy misy ao, sy tsy mamoaka velively ny maha “itaukei” antsika io teny io, fa fiteny britanika ary tonga niaraka tamin-dry zareo britanika …
Mbola ao amin'io forum io ihany no ametrahan'I Alohabula1 [amin'ny teny anglisy] fa :
Raha manaraka ny fomba amrikanina isika dia izao no azo lazaina “Afrikana Fijiana” sy “Indiana Fijiana”. Ary raha ireo nifindra monina tany Etazonia tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa izao mety ho antsoina hoe Fijiana Amerikana sy Indiana Fijiana Amerikana, fa TSY ho Indiana Amerikana, satria ireo teny ireo dia efa voatokana ho an'ireo mena hoditra? Tena very tanteraka aho. Tena mety ho tiana ihany izany, indrindra fa lazaina ho avy any Afrika daholo no tena fihaviantsika rehetra, ka izaho izany ve mety ho Afrikana, Eropeana, Amerikana Hawaien??? Fijiana??? Satria miaina eto aho amin'izao fotoana izao? Sa kosa isika tokony hifototra amin'ny firenena iraiketan'ny fontsika? Na ny toerana ivelomantsika ankehitriny, na koa amin'izay nahaterahan'ireo raiamandrenintsika, na ihany koa any amin'izay nahaterahantsika, na nahalehibe antsika. Tena very foana aho e.
Tena tsy takatry ny olona ilay Sata, hoy I Delta [amin'ny teny anglisy], raha nitondra fanamarihana ao amin'ny tranonkalan-tserasera Fijilive :
Ny Satam-bahoaka no manana ny rariny. Teratanin'i Fiji isika rehetra, ara-pahaterahana, ary mendrika ny ho antsoina hoe Fijiana, saingy misy ireo fanasokajiana madinidinika hanavahana antsika toy ny hoe Fijiana, Indiana, Samoana, Tongiana, Fotsy avy any Nouvelle Zelande na Aostralia, etc.. Tsy misy afaka hanova ny fiaviany. Ny Satam-bahoaka dia manaiky ny fisian'ny maha-teratany, ry namako isany. Aza diso égocentriques loatra isika.
Ry Paceli sy Wendy kosa ao amin'ny blaogin'izy ireo Babasiga [amin'ny teny anglisy], dia mihevitra fa raha tsy maintsy hifidy anarana vaovao ho an'ny mponina ao aminy i Fiji, dia tsy maintsy anarana “foko tsy momba ny atsy sy ny aroa, ary vaovao, ho fiaingana vaovao ho an'i Fiji” . Hoy i Indo-Fijian Kaicolo mamaly azy ireo : “Fijiana aho, na iza ho faly na iza tsy ho faly… Ny maha Indiana ahy tsy tokony hanetry velively ny maha teratany Fijiana ahy!!”.
Tsy irery amin'izay mahatonga fahalinana ilay fanovana anarana. Ao amin'ny blaogy Soli Vakasama [amin'ny teny anglisy], dia heverina ho toy ny tsy manana fankatoavan'ny besinimaro ilay Filan-kevitra ho Fananganana Fiji tsara kokoa satria ireo mpikambana ao dia notendren'ny “fitondrana miaramila tsy ara-dalàna”[junte illégale[
Nihana vetivety ny fanoherana, ary isika, ato anatin'ny Soli Vakasama, mino fa ny mpikambana ao amin'ny Filan-kevitra ho Fananganana Fiji tsara kokoa dia zendana tanteraka amin'io fivoaran'ny fanoherana io, raha nieritreritra izy ireo fa ho zavatra hisosa mora izy ity ary tsy hihetsika ireo Fijiana maro fa hanohy ny fitadiavany isan'andro ihany, saingy tsy nosainin'izay ireo fa ny nataon'ity fitondrana miaramila tsy ara-dalàna tao Fiji ity dia nahatohina ny mponina tsirairay mihitsy ary hafa tsy toy ireo fanonganam-panjakana rehetra teo aloha ary tsy hitony ny olona raha tsy mandalo fitsarana ireo tompon'antoka tamin'izany.
Izahay, ato anatin'ny SV, dia miantso fanajanonana ity kolontsain'ny fanonganam-panjakàna ity ami'ny alalan'ny fitarihana ireo tompon'antoka hiatrika fitsarana na dia hiafara amin'ny fanamelohana ho faty aza izany ho an-dry Vore sy ny namany. Tadidionareo tsara, [George tompon'antoky ny fanonganam-panjakàna tamin'ny 2000] Speight nahazo fanalefahan-tsazy tamin'ny filoha Iloilo [ filoha Josefa] ka ny fanamelohana azy ho faty nanjary figadràna mandram-pahafaty araka ny teny midin'ny Commission des Grâces. Nefa kosa ry Vore sy ny mpitari-tafikany dia tsy olona sivily akory, toa an-dry Speight ka tsy misy mihitsy fialan-tsiny azo ekena avy aminy, ary sarotra inona ny hahazoany teny midina toy izany. Sa ahoana no hevitrareo?
Ho an'i Fiji Democracy Now [amin'ny teny anglisy], ny làlana tsara indrindra hananganana indray an'i Fiji amin'ny lafinny toe-karena sy pôlitika dia ny famerenana ny demikrasia narodana tamin'ny 2006.
Ny tena zavatra ilaina amin'ity fikatsahana anarana vaovao ity dia ny demokrasia. Tsy misy afa-tsy ny governemanta voafidy tamin'ny fomba demokratika ihany no hanam-pahefana hanao ny fanovana toy izany. Ny Komitim-pirenena'ny TsyFivakianaLoha ary ny BeLazao, tsy nofidiana, no te hanolotra demokrasia tsy manampaharoa ho antsika, araka izay fahitany azy, nefa nahoana izy no mitady anarana vaovao homena antsika alohan'ny fametrahana io demokrasia tsy manam-paharoany io?
Heverinay fa azo atao ny mamaly hoe : koa satria efa te-hamafy ny voan'ny fahatezerana sy ny fifampihantsiana ity fitondrana tsy ara-dalàna ity mba hampaharitra kokoa ny didy jadony. Lavitry ny eritreritra tena hampandroso marina an'i Fiji, asisiny ho ao anatin'ny fisavoritahana i Fiji, ny hatezerana ny fifampihantsiana. Ambaranay fa tsy maintsy averina ny demokrasia sy ny tàn-dalàna ankehitriny. Ndeha isika hiverina amin'ny ara-dalàna, fa tsy hihemotra, satria raha izao no ambara ho antoky ny hoavy, tsy mila an'io isika.
I Corruption Fighter, raha nitondra fanamarihana tamin'ny hafatry Soli Vakasama [amin'ny teny anglisy] , dia matoky fa ny fanoherana tamba-be an'ity Sata ity dia afaka hanafaingana ny fiverenan'ny democrasia :
Andro lehibe tokoa ho an'i Fiji. Angamba mba hisy zavatra tsara hivoaka amin'izao mafy zakaina izao raha ny tsirairay no mifanome tànana ao andamosin'ny ara-dalàna, sy ny fisainana nofaritan'ny Lalampanorenana. Aza adino mihitsy fa ny fanonganam-panjakàna tamin'ny 2006 dia nandrodana governemanta nivondronana antoko pôlitika maro izay nahasolo tena tsara ny vahoakan'i Fiji noho ireo governemanta rehetra efa nisy teo amin'ny tantarantsika.